novembre 2013 – filazantsaramada
« Ary ny anankiray tamin’izay niara-nipetraka nihinana taminy dia nandre izany ka nanao taminy hoe: Sambatra izay hihinan-kanina ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. » (Lioka 14:15b) Ny manodidina izao tenin’Andriamanitra manoloana antsika izao dia manome lanja indrindra ny amin’ny atao hoe: FANASANA. Io teny io dia fomba fiantsoana manokana ary natokana ho an’ireo sakaiza na namana na havana akaiky […]
Publié parfilazantsaramada novembre 29, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FANASAN’ANDRIAMANITRA
« Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho hanome anareo fitsaharana. »(Matio 11:28) Misy fisehoan-javatra maro ahitantsika ny karazana entana azontsika entina, ao ny mora entina, ary ao kosa no azo entina ihany fa sarotra entina. Sarotra kokoa ohatra ny mitondra vato 50kg eo an-doha noho ny mitondra vary iray kitapo […]
Publié parfilazantsaramada novembre 25, 2013 novembre 26, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FITSAHARANA!
Iray volan’ny Diakona: Nitory tamin’ny alalan’ny hira sy seho an-tsehatra Anisan’ny programan’asan’ny Club FF Lycée Nanisana ho amin’ny taom-pianarana 2013/2014 ny famangiana Fiangonana mandritra ny fanompoam-pivavahana Alahady (in-telo ao anatin’ny taona). Ny Fiangonana hatrany moa no manasa azy ireo ary amin’izany dia mandray anjara vavaka, vakiteny, 5 mn’ny SA, hira ary fanentanana mikasika ireo sehatra’asa […]
Publié parfilazantsaramada novembre 21, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Club Feon’ny Filazantsara Lycée Nanisana
« Ary nony tonga tany amin’ny taniny Izy, dia nampianatra ny olona tao amin’ny synagoga, ary talanjona ny olona ka nanao hoe: Avy taiza re no nahazoan’Ilehity izany fahendrena sy asa lehibe izany? Tsy Ilehity va ilay Zanaky ny mpandrafitra? Tsy Maria va no anaran’ny reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va […]
Publié parfilazantsaramada novembre 15, 2013 novembre 19, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur ATAONAO HO IZA MOA JESOSY ?
Fiaraha-miasa vaovao miaraka amin’ny Synodam-Paritany Sofia (FLM) Raha tsiahivina fohy ny endrim-piaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’ny Fiangonana dia atomboka amin’ny Fampiofanana antsoina hoe: “Fampitaovana ny olona masina”. Anjara biriky entin’ny FF hampahomby bebe kokoa ny Tafika Masina efa ataon’ny Fiangonana. Ny fikendren’ny Feon’ny Filazantsara moa dia ny hanitatra hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny Synodam-Paritany hafa. Koa […]
Publié parfilazantsaramada novembre 14, 2013 novembre 15, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FIARAHA-MIOMBON’ANTOKA FIANGONANA/ FEON’NY FILAZANTSARA
NY SANDRIN’I JEHOVAH
« Mifohaza, mifohaza, ry sandrin’i Jehovah, mitafia hery! Mifohaza tahaka ny tamin’ny andro fahiny! Dia tamin’ny taranaka lasa ela. Tsy hianao va Ilay nitetitetika an-dRahaba sy nitomboka ny dragona? Tsy hianao va Ilay nahamaina ny ranomasina, dia ny rano ao amin’ny lalina indrindra, ka nanao ny ranomasina lalina ho làlana nalehan’ny navotana? » (Isaia 51:9-10) Ny sandry […]
Publié parfilazantsaramada novembre 8, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY SANDRIN’I JEHOVAH
« Tsy voalazako va fa raha hino hianao, dia ho hitanao ny voninahitr’ Andriamanitra? » Jaona 11:40 Hoy tokoa mantsy i Maria tamin’ny maty i Lazarosy anadahiny : « Tompoko, maimbo izy izao », satria Jesosy niteny mba hanesorana ny vato. Nino i Maria fa afaka nanasitrana an’i Lazarosy i Jesosy, fa tsy nino kosa izy fa afaka nampitsangana […]
Publié parfilazantsaramada novembre 1, 2013 novembre 1, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FINOANA SY NY VONINAHITR’ANDRIAMANITRA